Indlela yokuphatha ibhali esweni. Izimbangela zokubonakala kwebhali kanye nezindlela zokwelashwa.
indlela yokuphatha ibhali esweni
Ibhali liyisifo sezinkophelo, lapho i-eyelash yezinwele iqala ukuvuvukala. Kuvuvukala, kuqhuma, futhi kuqhuma ngaphakathi. Uma ukuvuvukala kwe-lobule ye-gland ye-meibomian kwenzeka, ibhali langaphakathi lenziwa. Esikhathini esithombeni, ibhali kuleso iso ngokuvuvukala kwe-bulb yezinwele.
Izimbangela zokubonakala kwebhali ezweni zingase zihluke, kusukela emakhazeni nasebuthakathaka bokuzivikela, ekupheleni kokuphulwa okukhulu kwezitho zangaphakathi. Kodwa ezimweni eziningi, izifo eziphilayo eziyinhloko yisifo - igciwane le-staphylococcus aureus. Kungatholakala igciwane, noma cishe wonke umuntu usemngciphekweni nsuku zonke, kepha igciwane lesandulela ngculaza livimbela ukuthuthukiswa kwesifo. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukuqapha impilo yakho njalo nokugcina isondlo sokuvimbela namavithamini.
Ukutheleleka kwe-staphylococcus aureus kutholakala kubantu abane-diabetes mellitus, kanye nezifo zesigubhu sezinsi.
Izindaba ezinhle ukuthi ibhali kuleso sono kulula ukuphulukisa ngisho nengane, uma itholakele ngesikhathi. Akusakazeki, ngakho-ke akusadingeki ukuthi uhlele ukuhlukaniswa.
Izimpawu zisobala, ngakho-ke kuvame ukutholakala nesifo ngaphambi kokwakheka kwe-puffiness nokukhishwa kwamanzi.
Indlela yokuqonda ukuthi uyagula:
ijwabu leso liqala ukuchithwa;
kukhona ukuzwela okuqinile ukukhanya okukhulu;
mhlawumbe ukwanda okuncane kokushisa komzimba kuya ku-37.5 degrees.
Uma ubona lezi zibonakaliso kuwe noma ingane yakho, ibhali esweni lingakwelashwa ngaphandle kokulinda ukuba "uvuthwe." Uma ungakunaki ukuwohloka kwenhlalakahle, ngokoqobo ngosuku olujwayele ukuvuvukala, olubomvu, futhi lokhu kuzoletha ukukhathazeka okuningi nokuzizwa okungathandeki. Ezinsukwini ezingu-2-3 kamuva, i-abscess ecacile ye-purulent iyokwakha ekhoneni lokuvuvukala, okuzokwenzeka ngokushesha futhi okuqukethwe kuzophuma. Kulokhu, kufanele kususwe ngokushesha futhi iso lihlanjwe ngamanzi.
Okokuqala, zicacise umthetho obaluleke kakhulu - kunoma yikuphi, ungavuli i-abscess! Ungabulali, cindezela, noma ungathinti nhlobo! Lokhu kungaholela emiphumeleni eyingozi nakakhulu, kuhlanganise nokuhlukumezeka ku-retina, ukuphuphuthekisa, ukutheleleka kwamadoda nokufa. Kodwa ungesabi - akusibi kakhulu uma ungakwazi ukuphatha lesi sifo ngokushesha nangendlela efanele.
Kunoma yikuphi inqubo yokuvuvukala, umphumela wokushisa uphambene, ngoba ungabangela ukuvuvukala okungaphezulu kwezicubu eziseduze, kanye nokuthuthukiswa kwezinkinga. Ungafaki ukufudumala ukuphefumula - umswakama wejwabu leso eligulayo bese ukwanda, futhi uma usafaka i-compress evaliwe kuyo, kuyoholela ekuvukeni kwezicubu ezixhumene ne-abscess.
Ukwelapha ibhali esweni, sebenzisa amaconsi e-antibacterial, isibonelo, Tiatriosaline. Ukungcwaba izikhathi eziningana ngosuku, futhi ebusuku ubusika obuphansi bubeka amafutha okugcoba ebhali esweni (tetracycline, hydrocardisone). Ukwelashwa ngalezi zidakamizwa uma uthola izibonakaliso zokuqala kuzosiza ukuqeda ibhali ngaphambi kokubonakala kwayo okubonakalayo.
Njengoba esinye sezizathu zokuthi lesi sifo sibonakale siwukukhubazeka kokuzivikela, kuyadingeka ukuthatha amavithamini aqinile, udle izithelo nezithelo ze-citrus, futhi udle imikhiqizo yobisi yemvelo.
Ngesikhathi ukwelashwa, ungasebenzisi izimonyo noma ugqoke amalensi oxhumana nabo. Kunconywa ukuphatha isikhumba ezungeze iso nokuzivulela ngesisombululo esincane sokuphuza utshwala, i-zelenka noma i-tincture ye-calendula.
I-scabies itch, ukwelashwa kwama-scabi
Ukuphulukiswa nemikhiqizo ye-alabaster
Indlela yokufundisa ngokushesha i-parrot?
Kuthiwani uma kukhona inhlebo eqenjini?
Isikhumba se-Buckwheat nemifino
Ngingazifaka kaningi kangako ukugcoba ingane?
Ungathanda kanjani umfana onobuhlobo obubi kakhulu
Sling - into elula kumama
Ungamhalalisela kanjani ngesahlukaniso?
Ubani ozothola i-"Voice" bonisa inkathi yesi-5: izibikezelo zokuqala nokudumazeka
USergei Lazarev ucaphuna isithombe esishaya ngamadoda